Madaxweyne Donald Trump iyo Xukuumadiisa oo Looga Shakisanyahay Inay Xiriir Hoose la Leeyahay Dalka Ruushka (VIDEO) - Hablaha Media Network
Madaxweyne Donald Trump iyo Xukuumadiisa oo Looga Shakisanyahay Inay Xiriir Hoose la Leeyahay Dalka Ruushka (VIDEO)
HMN:- Madaxweynaha Cusub ee dalka Maraykanka Donald Trump iyo shaqsiyaad isaga aad ugu dhow ayaa looga shakisanyahay inay xirii hoose la leeyihiin dalka Ruushka.
Maalitii talaadada ayay ahayd markii Kaaliyihiisa dhanka ammaanka Michael Flynn ee xukuumaddii uu soo dhisay lagu qasbay inuu is casilo, kadib markii lagu helay inuu been u sheegay madaxweyne ku xigeenka dalkaasi.
Beentani uu sheegay ayaa banaanka u soo baxday kadib markii wariyeyaal u shaqeeya joornaalka New York Times ay daabaceen in Kaaliyihii dhanka ammaanka ee xukuumadda Donald Trump uu xiriir hoose la sameeyay sirdoonka dalka Ruushka iyo safiirka ruushka u fadhiya dalka Maraykanka.
Michael Flynn ayaa arintani markii hore beeniyay, sheegayna inaysan waxba ka jirin, laakiin sirdoonka dalka Maraykanka (FBI-da) ayaa Michael Flynn hordhigtay cadaymo adag oo muujinaya inay duubeen ayna la socdaan wixii ay ka wada hadleen Safiirka Ruushka iyo isaga.
Kaaliye Flynn ayaa markii la horkeenay cadaymaha adag ayuu qirtay inay ka wada hadleen isaga iyo Safiirka in ruushka laga qafiifiyo cuna qabataynta, waxaana ku qasbanaatay inuu iska casilo shaqadiisa maadaama danbi lagu helay.
Xisbiga dimuqoraadiga ee dalka Marakanka ayaa ku baaqay in baaritaan adag lagu suubiyo Madaxweyne Donald Trump iyo madaxda ka tirsan dowladiisa ee looga shakisanyahay inay xiriir la leeyihiin Ruushka.